फेरि अकस्मात प्रमिलाले हिरासतबाटै पूर्व पति सन्तोषलाई यस्तो खबर पठाएपछि… भेट्न मन होला त? (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > फेरि अकस्मात प्रमिलाले हिरासतबाटै पूर्व पति सन्तोषलाई यस्तो खबर पठाएपछि… भेट्न मन होला त? (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । चितवनमा केही समय चर्चित भएको सन्तोष र प्रमिलाको घटनामा फेरी ट्वीष्ट आएको छ । विदेशमा कमाएको सम्पत्ती समेत लिएर अर्कैसंग गएकी प्रमिला र उनका प्रेमी अहिले हिरासतमा छन् । ३५ दिन पछि फेला परेकी प्रमिला वर्दियाको अर्का ब्यक्तिसंग एउटा कोठामा फेला परेकी थिइन् । साउदीमा काम गरेर कमाएको सम्पत्ती समेत लिएर गएको भनिएकी प्रमिलालाई सन्तोषले वहुविवाहको मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उनीहरु अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । अब सन्तोष फेरी साउदी जाँदै छन् । उनका दुई छोराछोरी अब एक्लिएका छन् । कमाएको सम्पत्ती पनि सकिएपछि उनी अब छोराछोरीको भविष्यका लागि फेरी साउदी जाँदैछन् । तर प्रहरी हिरासतमा रहकी प्रमिलाले भने एक पटक सन्तोषलाई भेट्न चाहेकी छन् ।
उनले आफ्नो जिवनमा भएका केही कुरा नखुलाएका कारण अहिले यस्तो अवस्था आएको भन्दै उनले केही कुरा खुलाउन चाहेको कुरा बाहिर आएको छ । सन्तोषले पनि त्यो कुरा थाहा पाएको बताएका छन् । प्रमिलाले मलाई केही कुरा भन्न चाहेको भन्ने कुरा मैले पनि सुनेको छु, सन्तोषले भने, केही कुरा होला उनले भन्न चाहेको । अब म फेरि विदेश जाँदैछु ।
सन्तोषले प्रमिलाले केही कुरा लुकाएको हुनसक्ने पनि बताएका छन् । प्रमिलालाई केही भएको पक्कै पनि होला उनले केही कुरा मनमा लुकाएकी होलीन् सन्तोषले भने । प्रमिला परिबन्धमा परेको पनि हुनसक्ने आशंका गरेका छन् । दिन त प्रमिलाले धोका नै दिइन्, उनको आँखाको हेराई हेर्नुस् हुन त उनको जिवनमा केही न केही त पक्कै भएकै होला ।
यति ठूलो निर्णय त्यसै त लिइनन् होला सन्तोषले भने । प्रमिलालाई लिएर जाने सुरेश परियार पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमै थिए । सुरेश विदेशवाट आएर प्रमिलालाई लिएर गएका थिए । सुरेशको पनि दुई छोराछोरी र श्रीमती छन् ।